Isu tinoziva kuti iwe uchafadzwa nekutenga kwako kubva kuComWales. Nekudaro, panogona kunge paine nguva apo iwe pauchazoda kudzorera zvinhu kwatiri @ Returns dept, Unit 21, Iyo Innovation Center, EBBW VALE NP23 8XA. Ndokumbira kuti uone chikamu kubva pane zvakabvumiranwa zvirevo nemamiriro ekutengesa pazasi kuti uwane ruzivo maererano nekudzoka.
Kana usati wagamuchira zvinhu zvako unofanirwa kutiudza mukati memazuva manomwe kubva pazuva rekutumirwa kwekutumira. Kana tangoziva kuti hauna kugamuchira chinhu chako tichaferefeta nyaya iyi zvizere mukati uye nevatakuri vedu. Zvine kusuwa isu hatigone kuongorora risati ratumirwa kuburitsa kana nguva ino yapera.
Kana iwe ukachinja pfungwa dzako / Zvinhu Zvisingadiwe mukati memazuva gumi nemana ekugamuchira chete.
Muchitoro vatengi havagone kudzima kana chinhu icho chabhadharwa, kubviswa uye kushandiswa. PaInternet Kana iwe uchinge uchinge wachinja pfungwa dzako nezve chero chinhu chakarairwa uye uchishuvira kuidzosera, zvino zvinoenderana neDanho rekutengesa Mitemo (Chibvumirano chevatengi) unogona kuita izvi chero iwe ukatizivisa nezvechisarudzo chako mukati memazuva gumi nemana wagamuchira.